Xaaji Cumar Camey iyo 19 nin oo kale oo ciidamada itoobiya u taxaabeen xabsiga Wardheer .
Xagarsararaweyne,06 Dec 2003.Caaqil Xaaji Cumar Camay iyo 19 nin oo kale ayaa shalay jimcihii iyaga oo jooga magaalada Xagarsararaweyne oo ku taala duleedka magaalada Buuhoodle ayaa waxa loo taxaabay xabsiyo ku yaala magaalada Wardheer ee Ethopia.
Sida uu sheegay wiilka uu dhalay xaajigu oo mar ay waraysi la yeelatay idaacada BBC-du,waxa uu xaqiijiyey in ragaas la qabqabtay iyaga oo Sararaweyne u tegey inay Itoobiyaanka kala xaajoodaan dhacdo maalmo ka hor ka dhacday magaalada Sararweyne,taasoo keentay in halkaa lagu dilo 4 askari oo itoobiyaan ah,kuwo kalena lagu dhaawacay,sidoo kalena ay itoobiyaanku iyaguna dil iyo dhacba ka geystaan deegaamo badan oo ka mid ah dhulkaas ku yaala xuduuda u dhaxaysa Ethopia iyo Soomaaliya.
Sida uu sheegay inanka uu dhalay Xaaji Cumar Camay,waxa uu xaqiijiyey in mar ay fooniyaha halowhalowda kula xidhiidheen dad jooga magaalada Wardheer,in ay u xaqiijiyeen in dhamaan dadkii ay itoobiyaanku kaxaysteen ay caafimaad qabaan,isla markaana odayaashii lagu hayo xabsiga dhexe ee magaalada,meesha 10kii dhalinyara ahaydna lagu hayo xarunta ciidamada itoobiyaanka ahi ay ku leeyihiin magaalada Wardheer.
Gabi ahaanba isku soo wada duuboo,waxaa maanta ka taagan magaalada Buuhoodle iyo tuulooyinka hoos yimaada oo dhanba baqdin badan,oo laga cabsi qabo inay arintu faraha ka baxdo,oo hadii arinta aanay intaas ku qaboobin.
Wafdi heer Wasiir ah oo imanaya Gobolka Cayn Caasimadiisa, Buuhoodle. .
Buuhoodle,Somalia,(Radio Lascaanod),05 Dec 2003.Wararka naga soo gaadhaya caasimadda gobolka Cayn ee Buuhoodle ayaa waxa ay sheegayaan in dhibaatadii ka dhacday magaalada Sararaweyne iyo Wafdigii Nabadda ee Itoobiya xidhxidhay aan weli xal loo helin, dadaal badanina ka socdo gobolka Cayn, iyo xarunta maamul Goboleedka Puntland ee .
Wafdigii Nabadda ee ay dawladda Itoobiya ku xidhxidhay magaalada Sararaweyne waxa ay geysay magaalada Wardheer. Dadkaas oo tiradoodu dhan tahay 20 qof, waxaa loo qaybiyey laba qaybood. Qayb waxaa lagu xidhay xarunta Booliska ee Wardheer, waana Odayaashii iyo Madaxdii Gobolka Cayn ee hogaaminayey wafdigaas nabadda. Qaybta kalena waxaa lagu xidhxidhay saldhig militari oo Wardheer ku yaalla, waana 10 dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka la xidhxidhay.
Dhinaca kale waxa ay wararku sheegayaan in Dawladda Itoobiya ay u qabatay 10 maalmood in lagu keeno wax-hel iyo wax-waaba qalab militari oo dawladda Itoobiya ku dacwiyayso in la waayey ka dib markii shuftadaasi daadiyeen qoryahoodii. Qalabkaas ay dawladda Itoobiya ay dalbanayso in la keeno waxaa ka mid ah:
8000.00 (Sideed Kun) oo lacagta Birta ah.
5 Kabood oo ciidamadu xidhaan
5 Dirays oo ciidamadu xidhaan.
1200 xabo oo rasaasta Aakaha ah.
230 xabo oo rasaasta Badhdaloolka ah.
3 silsiladood oo Badhdallool ah.
Garaad C/llahi Soofe iyo waxgaradka kale waxa ay ku jiraan uruuris iyo xogogaalsi ku saabsan qalabkaas dawladda Itoobiya ku dacwiyeyso inay ka maqan yihiin, ka dibna waxa ay rabaan in muddo todobaad ah ka dib ay safar ugu baxaan Wardheer si ay dawladda Itoobiya ugala soo xaajoodaan dhibkaas dhacay..
Dhinaca kale wararka naga soo gaadhaya maamulka Gobolka Cayn ayaa waxa uu sheegayaa in Wafdi heer Wasiir ah oo ka imanaya Maamul Goboleedka Puntland Caasimadiisa uu maalmaha inagu soo fool leh ku soo aaddan yahay Gobolka Cayn caasimadiisa Buuhoodle. Warkan waxaa laga soo xigtay Madaxweyne-ku-xigeenka maamul Goboleedka Puntland Mudane Maxamed Cabdi Xashi oo maanta la soo hadlay mas�uulinta Gobolka Cayn.
Sidoo kale waxa ay wararku ku darayaan in madax sarsare oo ka tirsan kilinka Shanaad ee ismaamulka Itoobiya ay imanayaan Wardheer maanta ama berito. Madaxdaas waxaa ka mid ah:
Cabdi Jamac Dhible .
Ina Maxamud Wayrax.
C/qani Nadiif Muuse.
Dhinaca Roobabka waxaa wararku sheegayaan in maanta oo Gobolka Cayn ugu aaddan habeenimo marka Radio Lascaanod la xidhiidhayey uu hillaacu dhinac kasta laga arkayey. Wararku waxa ay intaas ku darayaan in roobku uu xidhiidhsan yahay laga soo bilaabo Wardheer ilaa marqaan. Sidaas waxaa sheegay Baabuurtii soo martay degaamadaas. Magaalada Buuhoodle waxaa helay roob qabowsin ah.